France iyo S. Africa oo ka Haray Koobka Adduunka
Labadan waddan oo qeybta A ku wada jiray ayaa labaduba haray ka dib markii waddanka K. Africa ay 2-1 kaga adkaatay France
K. Africa iyo France oo maanta wada ciyaaray ayaa labaduba ka haray inay u gudbaan wareegga 16aa ee ciyaaraha adduunka. Inkasta oo ay K. Africa 2-1 ku badisay, haddana natiijadaasi wax uma tarin si ay ugu gudubto wareegga kale.
Dhinaca kale, labada waddan ee Uruguay iyo Mexico oo qeybta A kulay jiray waddamada aan kor ku sheegnay ayaa iyagu u gudbay wareegga 16aad. Inkasta oo waddanka Uruguay uu 1-0 kaga adkaaday Mexico, taasoo Mexico ka dhigtay inay isku dhibco noqdaan K. Africa, haddana farqiqa dhinaca goolasha ayaa Mexico ka dhigay inuu u gudbo wareegga xiga.
K. Africa oo koobka adduunka marti galinaysa iyo France oo wax badan laga filayey, laakiin ay beryahan dambe is-maandhaaf maamulka iyo laacibiinta ahi uu u dhexeeyey, ayaa niyad jab badan ku abuuray taageerayaashooda.
Ciyaaraha xiga ee maanta dhacaya waxay kala yihiin: Argentine Vs Greece iyo Nigeria Vs S. Korea.